Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Lymphangiomas (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) လည်ပင်း အကျိတ် တမျိုး
ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာရှိပါကဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ အိမ်ထောင်၊ ကလေး ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်။ "လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။" ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ Facebook ကနေ မေးတာလဲ ပြန်ရှာရတာမလွယ်လို့ အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။ ဆေးပညာစာတွေ ဖတ်လိုပါရင် မာတိကာ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။- http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ဆေးပညာစာများ- http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ- http://yamuna-online-clinic.blogspot.in ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://my-sayawun-life.blogspot.in/ ဆရာဝန်ဘဝ အမှတ်ရတာတွေ - http://dts-political-page.blogspot.in/ နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာ- http://yamunaclinic.org/ ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://facebook.com/tint.swe.dr Facebook Monday, February 21, 2011
ကျနော့်အသက် ၂၆ နှစ်ပါ။ ကျနော့်လည်ပင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ လလောက်က အကျိတ်ပေါ်ပါတယ်။ အကျိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာက အနည်းငယ် ကြီးနေရာကလွဲလို့ ဘာခံစားမှုမှမရှိပါ။ အကျိတ်ကလည်း လည်ပင်း ရဲ့ ညာဘက်မှာ ဆားငံသီးစေ့လောက် ရှိပြီး၊ ဒီတိုင်းကြည့်ရင် မမြင်ရဘဲ မော့ကြည့်မှ သိတာပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက Lipoma (အဆီကျိတ်) ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြီး ဆေးရုံတက် ခွဲဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ခွဲတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ ပါတ်ကခွဲတာပါ၊ ထုံဆေးနဲ့ ENT မှာခွဲပါတယ်။ ထုံဆေးနဲ့ ဆိုတော့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ လုပ်ကိုင်ပြောဆိုနေတာ အကုန် ကြားရပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက Lipoma မဟုတ်ဘဲ muscles အောက် ရောက်နေတယ်လို့ ပြောသံကြားပါတယ်။ နောက် Biopsy လုပ်ပါတယ်၊ Biopsy Result က ကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ပြန်ဖြစ်ရင်တော့ မေ့ဆေးနဲ့ ခွဲရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Biopsy Result ရဲ့ conclusion မှာတော့ Cystic Lymphangioma neck လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးကိုလဲ မေးဖို့ အခွင့်မကြုံတာမို့ ကျနော့် ရောဂါနဲ့ ရှောင်သင့်တာတွေ ပြောပြပေးပါ။
• Lymphangiomas (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) ဆိုတာ (လင့်ဖ်) သွေးပြန်ရည်လမ်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်လို့ အကျိတ် ဖြစ်လာတာပါ။ • သွေးပြန်ရည်စနစ်ဆိုတာတာ လူတိုင်းမှာရှိတယ်။ တကိုယ်လုံးက (တစ်ရှူး) တွေထဲက ပိုနေတဲ့အရည်တွေကို သွေးပြန်ကြော စနစ်ထဲ လာထည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ • (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) က အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငယ်သူတွေက အဖြစ်များတယ်။ အသက် ၂ နှစ်အောက် လည်ပင်းမှာ ဖြစ်တာ ၉ဝ% ရှိတယ်။ • မွေးကတည်းက ဖြစ်တာလဲ ရှိတယ်။ • မွေးပြီးမှ ဖြစ်သူတွေမှာ (အင်ဖက်ရှင်) ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ ခိုက်မိတာနဲ့ (လင့်ဖ်) လမ်းပိတ်တာတွေကြောင့် ဆက်ဖြစ်လာစေတယ်။
• အများဆုံးက Benign lesions ခေါ်တဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်ရောဂါပါ။ ခပ်ပျော့ပျော့၊ ဖြေးဖြေးသာကြီးကြီးလာတယ်။ • Lipoma အဆီအကျိတ်၊ Sebacious cyst ချွေးထွက်အကျိတ်တွေနဲ့ သိပ်တူတယ်။
• Capillary အမျှဉ်၊ Cavernous lymphangiomas အခေါင်း နဲ့ Cystic hygromas (ဆစ်စတစ်-ဟိုက်ဂရိုးမား) ဆိုပြီး ၃ မျိုး ရှိနိုင်တယ်။ Hemangiolymphangioma သွေးပါတာက မွေးရာပါ။
• Capillary lymphangiomas တွေက (လင့်ဖ်) အမျှဉ်သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ပြီး အရေပြားအပေါ်ယံမှာ ရှိတယ်။
• Cavernous lymphangiomas တွေက (လင့်ဖ်) အကြော ခပ်ဖေါင်းဖေါင်းနဲ့ သူ့ဘေးက (တစ်ရှူး) တွေနဲ့ ရောနေတယ်။ • Cystic hygromas ဆိုတာ ကောက်ရိုးရောင် အရည် ပြည့်နေမဲ့ အိတ်သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်တယ်။
• Hemangiolymphangioma မှာ သွေးပါမယ်။
• Microcystic lymphangiomas အသေးစားနဲ့ Macrocystic lymphangiomas အကြီးစား နဲ့ Mixed lymphangiomas အသေး + အကြီးစား လို့ ခွဲနိုင်သေးတယ်။
• လည်ပင်းက (ဟိုင်းဝိုက်) အရိုးနုရဲ့ အထက်နဲ့ အောက် ဆိုပြီး ခွဲစိတ်-ဆေးပညာမှာ စနစ်တကျ ပြောသေးတယ်။ အောက်တဖက်ထဲ၊ အထက်တဖက်၊ အောက်နှစ်ဖက်၊ အထက်နှစ်ဖက် နဲ့ အောက် + အထက် နှစ်ဖက်။
• အမျိုးအစားအလိုက် ကုရမယ်။ Aspiration စုပ်ထုတ်နည်း၊ Surgical excision ခွဲထုတ်နည်း၊ Laser လေဆာနည်း၊ Radiofrequency ablation ဓါတ်ရောည်ခြည်နည်း နဲ့ Sclerotherapy ဆေးထိုးနည်းတွေနဲ့ ကုနိုင်တယ်။ • ခွဲထုတ်တာ အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်တယ်။ • ခွဲစိတ်တာတောင် Cystic hygroma ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ (တစ်ရှူး) တွေ ထုတ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်စိနဲ့ခွဲလို့ မရတတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ လူနာအတော်များများ နှစ်ခါ ခွဲရတယ်။ • လည်ပင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ ချိုင်းနဲ့ ရင်ခေါင်းအထဲမှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ • ခွဲစိတ်ထုတ်နည်း လုပ်တဲ့အခါ - 1. Meticulous surgical excision အထူးဂရုစိုက် ခွဲစိတ်နည်း ဆိုပြီး၊ လုပ်နိုင်တာ ကောင်းတယ်။
2. Local recurrences အရင်နေရာမှာ ပြန်ဖြစ်တာ၊
3. Fistula malformation မတူတဲ့ မျက်နှာပြင် နှစ်ခုအကြား လမ်း (ပြွန်) ဖြစ်တာ နဲ့ 4. Infection (အင်ဖက်ရှင်) ရောဂါပိုးဝင်တာတွေ ကို သတိထားရမယ်။